बधाई छ सनिल! बक्सिङमा सनिलले नेपालकै लागि जिते ५०औं स्वर्ण – PathivaraOnline
Home > खेलकुद > बधाई छ सनिल! बक्सिङमा सनिलले नेपालकै लागि जिते ५०औं स्वर्ण
मंसिर २४,काठमाडाैं । आज नेपालकै मैदानमा हुदै गरेको साग गेमको अन्तिम दिन हो । नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा नेपालले स्वर्ण पदककाे संख्या ५० पुर्‍याएकाे छ । मंगलबार बक्सिङमा नेपालका लागि सनिल शाहीले स्वर्ण जित्दै नेपालका लागि ५०औँ स्वर्ण दिलाएका हुन् । सातदोबाटोमा भएकाे पुरुष ६० केजी तौल समू काे खेलमा भारतका खेलाडीलाई हराउँदै सनिलले स्वर्ण जितेका हुन् ।उनले भारतका साविक विजेता अभिरन्दर सिंहलाई हराए ।
जारी सागमा नेपालले बक्सिङमा तीन वटा स्वर्ण पदक जितेकाे छ । यसअघि मिनु गुरुङ र भूपेन्द्र थापाले बक्सिङमा स्वर्ण जितेका थिए ।याेसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले नेपालले ५० स्वर्ण जित्छ भनेर गरेकाे दाबी पनि यथार्थमा परिणत भएकाेछ ।
भारतका विपक्षी दल भने उक्त विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दु अतिवादी भएकाले यस्तो विधेयक ल्याएको उनीहरूको आरोप छ। मन्त्री शाहले ती देशका मुस्लिम सज्जनले पनि आफू धार्मिक रूपमा पीडित भएको पुष्टि गरी आवेदन दिए त्यसमा विचार गर्न सकिने जानकारी दिएका छन्।